Gịnị bụ 10.0.0.1?
The 10.0.0.1 bụ a onwe IP address, Ọ bụ nnọọ yiri 192.168.1.1 IP Address, na Ọ na-emekarị na-eji ọtụtụ rawụta ụlọ ọrụ dị ka a ndabere IP address na n'ji ngwaọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ na netwọk ngwaike.
ndị a, Otú ọ dị, ike ga-eji weba enweghị eme ka ọ bụla nsogbu. Ihe atụ ụfọdụ nke routers eji 10.0.0.1 IP adreesị ka ha ndabere IP address bụ Xfinity routers na Cisco ika routers nyere site Comcast.
10.0.0.1 IP adreesị ma ọ bụ 10.0.0.0.1 IP adreesị is one of the most used IP for routers. Ọ na-eji iji nweta rawụta admin panel. Site na-egbu osisi n'ime rawụta admin panel, ị nwere ike ịgbanwe gị rawụta Wi-Fi paswọọdụ, troubleshoot network nsogbu, mee ka gị na netwọk ọzọ ala, dezie gị DNS (Ngalaba Aha System), LAN (Obodo Area Network), Proxy ntọala ma na-ekiri niile ngwaọrụ jikọọ netwọk gị.
Olee otú Nbanye 10.0.0.1?
➥ Mbụ niile na-emeghe ọ bụla nchọgharị na weebụ gị PC.
➥ Mgbe ahụ pịnye http://10.0.0.1 na ihe nchọgharị weebụ adreesị mmanya na pịa Tinye.
➥ Here you can fill out the login details of admin (i.e.. Aha njirimara na paswọọdụ). Tinye ndabere Aha ojii ma Paswọdu maka ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị Ike jikọọ 10.0.0.1?
My enyi Ọ bụrụ na ị pụghị ịhụ rawụta admin panel, jide n'aka na ị na mbụ mesịa adreesị IP ezi. Normally 10.0.0.0.1 na 10.0 0.0 1 are written rather of 10.0.0.1. IP adreesị na-agụnye naanị digits na oge, abụghị akwụkwọ ozi. The adreesị IP na-eji iji nweta ochichi interface gị rawụta bụghị 10.0.0.1.
10.0.0.1 rawụta Aha ojii & Password List
10.0.0.1 admin paswọọdụ
10.0.0.1 (efu) (efu)
Nke ahụ bụ ihe niile banyere 10.0.0.1 IP Nbanye Admin. M na unu dị ka nke a post, but if you facing any problem regarding this post, mgbe biko ikwu anyị na anyị ga na-agbalị iji dozie nsogbu gị dị ka anya dị ka o kwere, ekele maka ileta anyị saịtị.
Previous Post:192.168.2.1 Aha ojii & Password – 192-168-1-1l.com
Next Post:Chọta rawụta IP Address